धनतेरसमा कुन नेपाली अर्बपतिले के किने ? – Clickmandu
धनतेरसमा कुन नेपाली अर्बपतिले के किने ?
क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक ८ गते १८:०६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा धनतेरस नेपालमा पनि मनाउन थालिएको छ । भारतमा धुमधामसँग धातु किनेर मनाइने यो पर्व नेपालमा पनि धुमधामका साथ मनाउन थालिएको हो । यो दिन जति खर्च गर्यो, उति नै लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
विषेशगरि धनतेरसमा चाँदीका गहना तथा भाँडाहरु किन्ने गरिएको छ । यो दिन सबैले आ– आफ्नो हैसियत अनुसारले सुन र चाँदी किन्ने गरेका छन् । यसदिन खरिद गरिएको सुनचाँदीले घरमा सुख, समृद्धी भित्रिएर धनको कहिले अभाव हुदैन भन्ने मान्यताले गर्दापनि धनतेरसको महत्व समाजमा बढ्दो छ । त्यसैले हुनेखानेहरुले सुन, चाँदी, हिरालगायतका महंगा धातुहरु किन्ने चलन छ ।
धनतेरसमा सामान्य मानिसले के कत्ति धन किन्नछन् भनेर सबैले अनुमान गर्न सक्छन् । तर उच्च घराना तथा धनाढ्य व्यक्तिहरुले धनतेरस के किनेर कसरी मनाउछन् सबैले अड्कलबाजी गरेका हुदैनन् ।
हामीले अर्बौं रुपैयाँका मालिक नेपालका उद्योगीरव्यवसायीले धनतेरस कसरी मनाउँदैछन् त भनेर सोधेका थियौं । उनीहरुको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः
आज धेरै कार्यक्रम परेर बढी व्यवस्त भएँ । राति घर फर्किने बेलामा केही न केही किनेर मात्रै फर्किन्छु । धनतेरसमा म हिरा र सुनचाहीँ किन्दिन । तर चाँदी भने किन्छु । किचेनका सेटहरु पनि किन्छु । घरलाई चाहिने सामानहरु किन्छु । पूजाका सामानहरु किन्छु । यस्तै हो मेरो किनमेल । म अलि बढी नै पुजाआज गर्ने मान्छे हुँ ।
धनतेरस हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण परम्परागत मान्यता हो । यो दिन केही सामान किन्नुपर्छ भन्ने चलन छ । म पनि त्यस्तै केही सामान किन्छु । भ्याएँ भने साँझ सपिङ गर्न जान्छु । भ्याइन भने पनि परिवार अन्य सदस्यले केही न केही त पक्कै किन्छन् । ठ्याक्कै यही नै किन्छु भन्ने छैन । जे होस् केही न केही सामान अवश्य किन्छु ।
दिपावली हाम्रो निकै महत्वपूर्ण चाड हो । हामी दिपावलीमा निकै व्यस्त हुन्छौं । तिकार शुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन धनतेरस हो । यो दिन लक्ष्मी पुजाका लागि आवश्यक पर्ने सामान किन्ने चलन छ । त्यो सँगै सुनचाँदीका सिक्का, काँसका भाँडाकुँडा किन्ने चलन छ । सुनकै सिक्कको किनियो भिने ६०÷७० हजारको सपिङ गरिएला । नत्र भने धनतेरसका लागि १०÷१५ हजारको सपिङ गरिन्छ । परिवारका सदस्यहरु भेला भएर साँझ पुजा गर्छौं ।
धनतेरसमा केही सामान किन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले हामी प्रत्येक वर्ष धनतेरसमा लक्ष्मीपूजाका लागि चाहिने आवश्यक सामान किन्छौं । लक्ष्मीको मूर्ति, काँसका भाँडाकुँडा, सुन–चाँदीका सिक्का र लक्ष्मी पुज्दा चाहिने अन्य सामाग्री आजकै दिन किन्छौं । धनतेरसको किनमेल आमाले गर्नुहुन्छ । साँझ परिवारका सबै सदस्यहरु बसेर पुजाआजा गर्छौं । दिपावली हाम्रो विशेष चाड हो । तर पछिल्लो समयमा धनतेरसमा महंगा सामान किनेर भड्किलो बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । जुन मलाई मन पर्दैन ।
व्यवसायीक घराना भएकाले परिवारका अधिकांस सदस्यहरु सँधै व्यस्त हुन्छन् । त्यसैले हामी तिहारमा जहाँ भए पनि भेला हुन्छौं । अरु चाडबाडमा बरु परिवारका सबै सदस्य भेला नहुन सक्छन् । तर, तिहारमा सबै भेला हुने चलन छ ।
आज तिहारको पहिलो दिन अर्थात् धनतेरस हो । धनतेरसलाई हामी विषेशरुपमा मनाउँछौं । आज साँझ एउटा दियो बालेर भाँडाको गर्छौं । भोलि ११ वटा र पसी २१ वटा दियो बाल्छौं ।
धनतेरसमा केही नयाँ सामान जोड्ने चलन छ । पहिले–पहिले त म आफैं सामानहरु किनेर ल्याउँथे । अब त बुहारीहरु पनि छन् । त्यसैले अचेल धनतेरसको किनमेल गर्ने जिम्मा बुहारीहरुलाई दिएकी छु । उनीहरुले नै सामान किनेर ल्याएका होलान् । बिनोद बाबु दिल्ली जानुभएको थियो । आज फर्किँदै हुनुहुन्छ । साँझ सबै भेला भएर पुजाआजा गर्छौं । सबै सँगै भएर खाना खान्छौं ।
म सामान्य व्यक्तिहरुले जस्तै गरेर धनतेरस मनाउछु । हाम्रो समुदायमा दिपावली बर्षदिनमा आउने चाडहरु मध्ये सबैभन्दा ठुलो र महत्वपुर्ण पर्व हो । घरको सरसफाइ गरेर फोहार मैला फ्याक्ने साथै आफन्तहरुसँग भेटघाट गरी मनको मैलापनि फ्याक्ने गर्छु । धनतेरसमा चाँदीको सामानहरु किन्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यस्तो किनमेल म गर्दिन मेरी श्रिमतीले गर्ने गरेकी छिन् । उनले चाँदीका गिलास र अन्य चाँदीका गहनाहरु किनेकी छिन् ।
अपिसमै पुजाआजा गर्ने चलन छ । धनतेरसमा खासगरी हामी मेटल किन्छौं । नयाँ सामान किन्छौं । खासगरी चाँदीका सिक्का किन्छु ।
आज जति खर्च गर्यो, उतिनै कमाई हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले केही नयाँ कुरा किनेर खर्च गर्छौं । र, साँझ सबैजना घरमा बसेर पुजा आजा गरी रमाइलो गर्छौं ।
धनतेरसको सपिङ गर्नकै लागि न्यूरोडतिर गएको छ । चाँदीका सिक्का र लक्ष्मी पूजाका सामान किन्ने सोच बनाएर आएको छु । कुन चीज कति मात्रामा किन्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । मन परेको चीज भट्टाए धेरै किन्न पनि सकिन्छ ।
मैले तिहारमा रमाइलो गर्ने भन्दापनि बढी आराम गर्ने गरेको छु । गत वर्षहरुमा मैले घर र अफिसका लागि चाँदीका केही गहनाहरु किन्ने गरेको थिए । यो वर्षपनि घर र अफिसका लागि सुन चाँदीका सिक्काहरु किनेको छु । तिहारमा मैले लक्ष्मी पुजा र मह पुजामात्र मनाउछु । मेरो दिदी बहिनीहरु कोहि छैनन् त्यही भएर भाइटीकाको दिन आरामले बस्छु ।
ग्लोवल आइएमई बैंकको सीईओमा भेट्रान बैंकर रत्नराज बज्राचार्य नियुक्त